I-Austrian flying squirrel (i- Glaucomys sabrinus fuscus ) inobunzima, ubomvu obusondayo obunobumba obomvu kumqolo wayo kunye nebala elimnyama kwibala. Amehlo akhe amakhulu, adumile, kwaye amnyama. Umsila we squirrel ububanzi kwaye uphezulu, kwaye kukho iimbumba ezibizwa ngokuthi i-patagia phakathi kweemilenze zangaphambili kunye neenyawo ezisebenza njengama "maphiko" xa i-squirrel isuka emthini ukuya emthini.
Ubude: phakathi kwama-11 no-12 intshi
Ubunzima: phakathi kwama-4 no-6.5
Ezi ziqulatho ze-squirrel ezindizayo zifumaneka kwiindawo ze-conifer-hardwood okanye amahlathi angama-beech avuthiweyo, i-birch ephuzi, i-bell, i-hemlock kunye ne-cherry emnyama ehambisana ne-spruce ebomvu ne-balsam okanye i-Fraser fir. Le ngqungquthela isoloko ihlala kufuphi nemilambo nemilambo. Ngokuqhelekileyo uhlala kumaqela amancinci entsapho ezihlalweni emigodini nemithi yeentaka ezindala.
Ngokungafani nezinye i-squirrels, i-squirrel yaseNigeria yase-Virginia ihlala isondeza i-lichen kunye nezikhunta ezikhulayo ngaphezu nangaphansi komhlaba kunokutya ukutya okunomsoco. Kwakhona kudla imbewu ethile, iziqhamo, iziqhamo, iimbonki, inambuzane kunye nezinye izinto eziphathekayo.
Amehlo amakhulu amakhulu amakhulu, asemnyama abenza ukuba babone ekukhanyeni okuphantsi, ngoko ba sebenza kakhulu ebusuku, behamba phakathi kwemithi kunye nasemhlabeni. Ngokungafani nezinye i-squirrels, i-Austrian flying squirrels ehlala ehlala ebusika kunobusika.
Iimpawu zazo zihlukeneyo.
Elinye ilitha le-2 ukuya kwe-4 lizalelwa ngoMeyi nakuJuni ngonyaka.
I-Austrian flying flying squirrel njengamanje ikhona emahlathini abomvu ase-spruce e-Highland, Grant, eGreenbrier, ePendleton, ePocahontas, eRololph, eTucker, kwiiWebster zaseWest Virginia.
Ukulahleka kweendawo ezibomvu zeproruke ngasekupheleni kwekhulu lama-20 kwakudinga ukufakwa uludwe lwe-West Virginia e-flying squirrel enyakatho phantsi koMthetho weeNtsholongwane eziMngcipheko ngo-1985.
Ngowe-1985, ngexesha leNgcaciso yeeNtshontsho zeeNtshontsho, i-squirrels ezili-10 kuphela zafunyanwa ziphila kwimimandla emine eyahlukileyo. Namhlanje, i-biological and federal biologists ithathe i-squirrels ezingaphezu kwe-1,100 kwiindawo ezingaphezu kwe-100, kwaye zikholelwa ukuba ezi ndawo zingasabhekene nosongelo lokuphela.
Nangona ama-squirrels asasazeka ngokungaqhelekanga kwiindawo zabo ezidlulileyo kunye nobunzima obuphantsi, abantu babo bazimisele ukuzinza yi-US Fish and Wildlife Service. I-subspecies isabalwa njengengozi nje ngo-Matshi 2013.
Izizathu Zokuhlaliswa kwabantu
Ukutshatyalaliswa kwendawo yokuhlala kuye kwaba yimbangela ebalulekileyo yokunciphisa inani labantu. EWest Virginia , ukwehla kwamahlathi ase-Appalachian obomvu i-spruce kwakuphawulekayo kuma-1800. Imithi yayivunyiwe ukuvelisa iimveliso zamaphepha kunye nezixhobo ezifanelekileyo (ezifana ne-fiddles, guitar, and pianos). Imithi yayixabiseke kakhulu kwi-industry-building industry.
"Enye into ebaluleke kakhulu ekuhlaleni kwabantu base-squirrels kuye kwaba kukuhlaziywa kwakhona kwendawo yokuhlala yamahlathi," kubika i-Richwood, WV, iwebhusayithi.
"Nangona i-regrowth yemvelo iqhutyelwe iminyaka emininzi, inomdla kunye nokukhula okwenyukayo yi-US Forest Service Monongahela Ihlathi leSizwe kunye ne-Northeastern Research Station, ulawulo lwaseNtshona West Division of Resources Resources, iSebe leeHlathi kunye ne-State Park commission, i-Nature I-Conservancy kunye namanye amaqela okulondoloza, kunye namaziko abucala ukuba avuselele iiprojekthi ezinkulu zokubuyisela i-spruce ezibuyisela i-ecology system ye-Allegheny Highlands. "
Ekubeni ukuvakaliswa kwengozi, izazi zezinto eziphilayo ziye zafaka nokukhuthaza ukufakwa koluntu kwiibhokisi zeentlanga kwiibali ezili-10 zasentshonalanga nezantsi-ntshona yeVirginia.
Izilwanyana zaseprayimari ze-squirrel ziimfumba, iifisi, iifungulu, i-mink, i-hawks, i-raccoons, i-roccoons, i-skeks, iinyoka, kunye neekati zasekhaya kunye neenja.
Indlela Ongayinceda ngayo
Gcina iilwanyana zasekhaya ngaphakathi okanye ipeneni yangaphandle, ngokukodwa ebusuku.
Nika ixesha lokuzithandela okanye imali kwiCentral Appalachian Spruce Restoration Initiative (CASRI).
7 Ukunwabela NgamaZebra
USathana Ulingisa uYesu-Indaba yeBhayibhile
Ukwahlula okukhoyo Ingcaciso
IYunivesithi yaseAccount Fort Smith Admissions
Indlela yokudlala ibhola leMtyholi (okanye iMali yeBhola) I-Golf Tournament